एक Jackpot माथि इच्छा - Coinfalls क्यासिनो
बच्चाहरु संग दुनिया Cinderella को कथा सुने सबैका भन्दा दन्तिये प्रसिद्ध छन्, रेपन्जेल, लिटिल रेड राइडिङ हुड आदि. And building on the popularity of fairy tales there has been numerous slot games based on them. र एक यस्तो खेल हो एक Jackpot माथि इच्छा. तर यो खेल गर्दा अन्य परी कथा थिम्ड खेल तुलना किनभने यो वास्तवमा दन्तिये को एक नम्बर यसको विषय सँगै जोडती वास्तवमा अद्वितीय छ. यो रोमाञ्चक खेलको बारेमा थप जान्ने, पढ्न.
एक Jackpot माथि इच्छा खाका खेल द्वारा अनलाइन भिडियो स्लट खेल छ5रील र 20 paylines. यो स्लट खेल्न तपाईं आफ्नो शर्त राख्दै बन्द सुरु हुनेछ. तपाईं स्क्रिनको तल मा कुल बेट ट्याब टगल द्वारा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईंले यो खेल मा प्रति स्पिन 200 £ अधिकतम कहीं प्रति स्पिन 20p बीच शर्त गर्न सक्छन्. एक पल्ट तपाईं आफ्नो शर्त सेट, तपाईं दाँया कुनामा मा स्पिन बटन मारा गर्न सक्नुहुन्छ.
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं हरेक स्पिन पछि आफ्नो शर्त परिवर्तन वा एउटै एक जारी राख्न सक्नुहुन्छ. एक ओटो स्पिन विकल्प तपाईं हरेक स्पिन पछि स्पिन बटन मारा गर्न रुचि छैन भने पनि त्यहाँ छ.
एक Jackpot माथि इच्छा एक धेरै सुविधा धनी खेल हो. खेल दुई मुख्य बोनस छ जो प्रत्येक असंख्य मिनी-खेल विभाजित गरिएको छ.
तपाईं परी Tales बोनस जब तपाईं भूमि रूपबाट जो छ पहिले3को रील मा पुस्तक स्क्याटर प्रतीक को 1,3 र 5. तपाईं सफलतापूर्वक त्यसो गर्न व्यवस्थापन भने, तिमी खेल्न निम्न मिनी खेल को एक चयन गर्न विकल्प संग पुरस्कृत गरिनेछ
रेपन्जेल फ्री Spins – को रील मा देखिन्छ जो एक राजकुमार निःशुल्क Spins 5. उहाँले राजकुमारी जसबाट तपाईंको गुणक वृद्धि सुरक्षित गर्न टावर चढाई राख्छ. राजकुमार शीर्ष पुगेपछि खेल समाप्त.
Rumpelstiltskin सम्झौता निर्माता – यहाँ के तपाईं दिइएको धेरै सम्झौताहरू को एक चयन गर्न. तपाईं पनि प्रस्तावित सम्झौता अस्वीकार र एक राम्रो एक लागि प्रतीक्षा गर्न सक्छन्.
तीन साना सुँगुर फ्री Spins – एक सुँगुर जंगली निःशुल्क Spins.
ज्याक र द Beanstalk – यहाँ तपाईँले beanstalk बढ्न बनाउन सिमी छनोट गर्न छ. तपाईँले माथि पुग्न भने तपाईं सुनको हांस अन्डा पाउन सक्नुहुन्छ.
अब, यदि त्यो माथि बोनस सुविधाहरू पर्याप्त थिएनन्, एक Jackpot माथि इच्छा यस परी धर्म माता बोनस को रूप मा प्रदान गर्न थप छ. यो जहाँ तपाईं विकल्प को कुनै एक छनौट गर्न प्राप्त एक अनियमित ट्रिगर छ3तपाईं के बोनस gonna प्राप्त छन् प्रकट गर्न orbs.
तपाईं या त एक जंगली हुन सक्छ वा जंगली को प्रतीक वा तपाईं वरिपरि बनाउन वा पनि पुरा रील जंगली बनाउन. यी बोनस प्रत्येक फेरि एक कहानी पछि नाम र तिनीहरूलाई केही लिङ्क छ.
एक Jackpot माथि इच्छा सजिलै सबै भन्दा राम्रो खेल खाका खेल कहिल्यै साथ आए छ. त्यसैले, अनलाइन प्राप्त र यो एक प्रयास गर्नुहोस्. यो मूल्य छ.
नाम: एक Jackpot माथि इच्छा
विकासकर्ता : खाका गेमिङ
प्रति स्पिन शर्त: £ 0.20 - £ 200.00
बोनस विशेषताहरु: हो
फ्री Spins: हो